Mepụta nsogbu ahụ, kwụọ ụgwọ maka ihe ngwọta | Martech Zone
GỤKWUO na Ndụ OneCare, sọftụwia nke gunyere mmelite antivirus, nkwado ndabere, mmelite, & ọrụ ndị ahịa. Echere m na Microsoft mechara nakwere eziokwu ahụ na ha enweghị ike ịmepụta nnukwu ngwanrọ ma ọ na-efu ha nnukwu ego. Echere m na naanị ezi uche dị na ya bụ na Microsoft wepụtara na ngwaahịa ọzọ anyị na-akwụ maka iji nyere aka jikwaa nsogbu ndị ha kere na mbụ.
Nke a, ezigbo ndị enyi m, bụ ọdịmma nke ngụkọta. Echere m na ya na ndị isi anyị na Washington na-edepụta ụgwọ iji lụso nrụrụ aka ọgụ. Nchegbu zuru oke ebe a bụ na Microsoft nwere ike irite uru n'ezie site na ịhapụ mkpọchi nche na nsogbu na ngwanrọ nke ya nke ga-ewe ndị ọzọ Antivirus na ndị mmepe nchekwa oge ịchọta. Nke ahụ mere ka Microsoft dị n’elu elu nke ọrụ a. Ọ nwere ike ịkụ asọmpi ahụ ma bụrụ ihe ọzọ na-enye ego maka Microsoft.
Chaị. Ọ DY onye na-ekiri ihe a? Onye ọ bụla?
CSS Style maka Koodu na Blog gị
Feb 14, 2006 n’elekere 10:35 nke abali
Nke a na-echetara m ndị na-ere oghere na-eme njem na-atụfu akpa egbe na kapeeti gị, yabụ ị ga-ahụrịrị ngosi ngosi.
Olee otú 'ihe exterminator na-eweta niile òké na chinchi na ya, tupu àjà ọrụ?
Ụzọ iji gaa Micro$of! Ị ugbu a n'ọkwa n'etiti leagues nke '30s Chicago gansters efehe ọha na eze maka "ego nchebe" - ma ọ bụ ọzọ, ha nwere ike na-agbajikwa Windows.